Nhovo anonetsa zvikuru System
Kusarudza nhovo anonetsa zvikuru
Kutyaira muna nhovo anonetsa zvikuru
Very Narrow mukana nhovo anonetsa zvikuru
Double Deep nhovo anonetsa zvikuru
Gravity Kuyerera nhovo anonetsa zvikuru
Kusundira Back nhovo anonetsa zvikuru
Mezzanine Floor nhovo anonetsa zvikuru
Cantilever nhovo anonetsa zvikuru
Wire yepasi Products
anonetsa zvikuru Blog
Hongu, isu zvinoda zvose dzomunyika akarayira kuti kuramba Odha uwandu. Kana muchitsvaka kuti resell asi zviduku zvikuru kwazvo, tinoratidza iwe kuwedzera yako yakawanda kusvika mutengo zvatinogona.
Kutungamirira nguva anenge 7 Mazuva kuzvisunungura kuti mutariri uye chete akamurairawo kuti mitoro mutengo.
For vakawanda Kugadzirwa
Kutungamirira nguva mazuva 20-30 mushure mekugamuchira dhipoziti muripo. Kutungamirira nguva vanobudirira kana (1) zvatakawana dhipoziti wako, uye (2) tine chokupedzisira mvumo yenyu zvinhu zvenyu. Kana yedu vatungamirire nguva haashandi wava yako, tapota endai pamusoro wako zvinodiwa ne Kutengeswa wako. Muzviitiko zvose tichaedza achengete zvaunoda. Kazhinji tinokwanisa kuita kudaro.
Unogona kuita mari yedu akaundi, T / T, L / C:
Isu garandi anonetsa zvikuru yedu AND SHELVING nokuda 5-Makore Kunze kukodzera munhu oparesheni.
kuzvipira kwedu kuna kwako kugutsikana pamwe zvinhu zvedu. In garandi kana kwete, ndicho tsika vekwedu kuti kero uye kugadzirisa zvose mutengi nyaya vose zvinogutsa
Ndingashandisa kuisa Racks?
We vanotibatsira detailed gadza murayiridzo zvose mhando pasherufu. Kana zvichidiwa, isuwo anopa mainjiniya mavhidhiyo pachena.
Ndingaita sei kuti vapenyu zvakadzokororwa?
(1) Kukura kwakaita yokuchengetera zvinhu?
(2) nhovo pani divi: Height * Depth * Length?
(3) akaturikidzana vangani?
(4) Loading vanokwanisa neimwe chechetere? (Kana zvichiita, aigona here nomutsa ndiudze nhumbi dzenyu?)
(5) The RAL ruvara?
(6) vangani bays (nemhando)?
Tiri mugadziri uye nokutengesa zvakawanda maindasitiri uye ezvokutengeserana okuchengetera anonetsa zvikuru hurongwa uye zvinhu rokufambisa equipments kubva 2001. chikamu wose ukatenga pana Spieth anonetsa zvikuru anopiwa pamwe-gore 10 garandi.
© Copyright - 2010-2020:. All Rights Reserved闽ICP备17021624号 Hot Products - Sitemap - AMP Mobile
Warehouse nhovo Rack , nhoo anonetsa zvikuru aidzivirira , Warehouse nhovo anonetsa zvikuru System , nhoo anonetsa zvikuru dzaro , Gravity Kuyerera anonetsa zvikuru , Warehouse Storage Racks ,